संकटमा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा बृद्धि, कस्को कमाई कति (सूची सहित)
६ जेठ, काठमाडौं । मंगलबारसम्म १५ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो तेस्रो त्रैमसिक विवरण सार्बजनिक गरेका छन । बीमा कम्पनीहरुले सर्बजनिक गरेको बिबरण अनुसार चालु आ.ब.को तेस्रो त्रैमास माघदेखि चैत्रसम्ममा १ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख ५० हजार १ सय ८९ नाफा कमाएका छन । यो गत आर्थिक २०७५/७६ बर्षको सोहि अबधिको तुलनामा ३६.५९ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै चालु आ.ब.को दोस्रो त्रैमासिक कात्तिकदेखि पुषसम्मको भन्दा ४०.७५ प्रतिशतले बढी हो ।
कोरोना भाईरसहको माहामारीको कारण २०७६ चैत्र ११ गते देखि मुलुक बन्दाबन्दिमा रहँदा पनि बीमा कम्पनीहरु नाफामा देखिएका छन । यो त्रैमासमा प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले कमाएको छ । उसले गत बर्षको चैत्र मसान्त भन्दा १९२.६६ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको छ । उसले सार्बजनिक गरेको बित्तिय विवरण अनुसार गत बर्ष सोहि अबधिमा उसको नाफा १ करोड ५८ लाख ६८ हजार २६ रुपैंयाँ नाफा गरेको थियो भने चालु बर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा उसको आम्दानी ३ करोड ५३ लाख ४६ हजार २०६ रुपैंया आम्दानी गरेको थियो । यसरी हेर्दा उसको कमाई ३९.५८ प्रतिशतले बढी हो ।
कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी नाफा नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्सले कमाएको छ । उसलेचालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासको अन्त्य चैत्र मसान्त सम्ममा ४६ करोड ७५ लाख ७६ हजार ३ सय ४१ कमाएको छ । कारोबार उच्च गरे पनि उसको नाफामा भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा थोरै मात्रैे छ । यो बर्ष उसको नाफा गतबर्षको भन्दा ०.०८ प्रतिशत मात्रै बढी छ ।
यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्सको नाफा गत बर्षको भन्दा १७.४२ प्रतिशतले घटेको छ । तर चालु आ.ब.को दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा १५.३५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गतबर्ष चैत्र मसान्तसम्ममा उसको नाफा १० करोड ८० लाख ८३ हजार ८ सय ३० रुपैंयाँ थियो भने चालु अबको सोहि अबधिमा उसको नाफा ८ करोड ९२ लाख ५९ हजार १ सय ८५ रुपैंयाँ रहेकोे छ ।
कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा कम आम्दानी गर्ने जीवन बीमा कम्पनीमा रिलायबल नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । उसको चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमास चैत्र मसान्तसम्मको आम्दानी १६ लाख ७० हजार २०० रहेको छ ।
कारोना भाईरसका कारण अन्य क्षेत्रहरु संकटमा हुँदा पनि बित्तिय तथा बीमा क्षेत्र नाफामा गएका छन । यस अघि बैकिङ क्षेत्र पनि नाफामा नै रहेको विवरण सार्बजनिक भएको थियो ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको बृद्धि, होटल क्षेत्र चम्कियो
१ असोज, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन बिहिबार सेयर बजार…
एकैदिन ९ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् आज कति छ त प्रतितोला ?
१ असोज, काठमाडौं । साताको सुरुवातीदेखि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको…
निरन्तर घट्दै छ डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ त अन्य मुद्राको विनिमय दर ?
उद्यमी बन्न चाहनेलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण
एन आई सी एशिया बैंक ‘किया’ गाडीको बित्तिय साझेदार
सेयर बजारमा सामान्य सुधार, होटल क्षेत्र चम्कियो